Caddeynta Description Farsamo Job Sample - JobDescriptionSample.org
Home / farsamo- / Caddeynta Description Farsamo Job Sample
Caddeynta Description Farsamo Job Sample
Yacquub April 16, 2016 farsamo- Leave a comment 888 Views
Farsamo Psychiatric Sample Job Description
Engineering Farsamo Job Description Sample
QEEXID Farsamada daliisha
Sharaxaad shaqo farsamo caddayn ku lug leedahay soo ururinta, qaata, imtixaantid, iyo kaydinta of caddayn jirka ama hantida, ay shardi tahay in dhaqmayso Xeerka Cadaymaha Dembiyada Booliska iyo (PACE).
Shaqada Tani waxay ku lug leedahay xiriirinta farsamo iyo kormeerka processing ee goobaha waaweyn ee dembiyada.
Isuduwaha Evidence eegaya warbixinta Dakatu qoraal ah iyo warqadaha kale ee goobta ugu weyn ee dambiyada si ay u hubiyaan in ay dhammaystir ahaanshaha iyo saxnimadu.
Isuduwaha Evidence ka caawiyaa Hogaamiyaha Evidence Isuduwaha la baaraandegidda caddayn jirka ee Waaxda Booliiska.
Isuduwaha Evidence waxay ka haqab cadayn jidheed si fiican inventoried iyo in silsilad-of-haynta la hayo.
waxtarka shaqada iyo waxqabadka shaqada waxaa kormeera Hogaamiyaha Isuduwaha Evidence.
Kormeera ururinta ee aqoonsashada sixitaanka baakadaha iyo processing oo dhan caddayn shil iyo dembiyada goobta laga soo ururiyey by Farsamayaqaano Crime Muuqaal.
Hide la Saraakiisha Booliska iyo Xeer Ilaaliyaha Gobolka s si ay ugala hadlaan soo bandhigidda caddeymo jirka maxkamadda.
Ka haqab cadayn jidheed iyo warbixino la xidhiidha si fiican loo diyaariyey hordhaca maxkamadda.
Waanin Farsamayaqaano Crime Arag iyo saraakiisha booliiska heer-galo waxa ka dhigan cadayn jidheed sida loo soo ururiyey iyo sida loo warshadeeyey.
Ka haqab silsilad-of-haynta la hayo on shay kasta ee ashyaada cadeeynaayo ururiyey by Waaxda Booliiska.
Kartida in la dhiso iyo in ay xiriir shaqo oo wax ku ool ah oo la kormeerayaasha iyo shaqaalaha kale
Kartida inay la xiriiraan wax ku ool ah oo afka ah iyo mid qoraal ah
Kartida ay u shaqeeyaan terminal computer ah
Awoodda isku xirka shaqada kuwa kale ee dhinacyada soo ururinta cadaymaha jirka joogto goobaha dambiga
Awoodda si loo farsameeyo goobta dembi shaqaalaynta farsamooyinka iyo dariiqooyinka aqbalay iyo in ay tababaraan dadka kale xirfadahan
isku darka wax kasta oo tababar ah ,waxbarasho iyo waayo-aragnimo u dhiganta qalinjabinta dugsiga sare ama GED .Waxaa ugu yar ee ka mid ah waayo-aragnimo sano ee bakhaaraynta,kontaroolka alaabada,ama beerta oo ah ku habboon la xiriira,doorbidayaa in fulinta sharciga iyo ama ammaanka sare.
AQOON LOO BAAHDO,Xirfadaha iyo kartida
1.aqoon badan ee fingureprints iyo sharciyada caddayn iyo nidaamka.
2.xirfadaha kombiyuutarka aasaasiga ah.
3.Awood u leh inay si fiican u la co-workers shaqeeyaan,saraakiisha ,hay'adaha ka baxsan iyo dadweynaha guud.
4.Kartida inay la xiriiraan labada af ahaan iyo qoraal.
Hore Traffic Signal Farsamo Job Description Sample